Ungafika kanjani eChina?, Izindiza, izitimela nezinye izindlela | Izindaba Zokuhamba
Ungafika kanjani eChina? Izindiza, izitimela nezinye izindlela
UMariela Carril | | China, Iziqondiso, Ukuhamba kwe-Asia
Okwesikhashana manje I-China ihlala phakathi kwezindawo ezinhle zase-Asia ukwenza uhambo olungalibaleki.
Kuyimakethe yezivakashi evumela zombili izinkambo ezihleliwe ezinkambweni nakwezinye izindawo ezizimele zodwa, kepha uma sibheka ebalazweni sibona izwe elikhulu futhi elikude. Ayifinyeleleki? Akunakwenzeka! Yini enye, akunakwenzeka kuphela ukufika ngendiza ...
1 Ukufika eChina kuma-cruises aphesheya
2 Ukufika eChina ngendiza
3 Fika eChina ngomhlaba
Ukufika eChina kuma-cruises aphesheya
Yebo, kuyinketho onayo uma ujoyina ukuvakasha kobumnandi futhi ingenye yalezo ezikhethwe amaqembu abahambi abangaphezu kweminyaka engama-50 ubudala.
Imikhumbi yezikebhe yamazwe omhlaba enendawo yokugcina eya eBeijing ifika ethekwini laseTianjin kusuka kulo lonke elaseNingizimu-mpumalanga ye-Asia futhi kunjalo, futhi kusuka eHong Kong. Ngemuva kweShanghai kanye nenhlokodolobha uqobo, Jin njengoba bevame ukusho kuleli dolobha, kungumuzi ohlaba umxhwele onokuthile kwawo kubavakashi.
Izakhiwo zamakoloni zezitayela ezahlukahlukene, kufaka phakathi ezaseYurophu, izingosi zomlando ezithatha amakhulu uma kungenjalo izinkulungwane zeminyaka (kunendlela ye-Great Wall, i-Huangyaguan Pass, eseduze), ne-gastronomy emnandi futhi ecebile.
Inkampani Royal I-Caribbean has cruises ukuthi vakashela Tianjin. I Ukusinda of the Yiba, isibonelo. Kukhona izikebhe ezisuka eHong Kong noma kukhona ngisho nezinkambo ezithinta izindawo eJapane.
Le nkampani yenza kahle kakhulu kangangokuba umlingisi odumile waseChina uFan Bingbing ungunkulunkulukazi walo mkhumbi, umkhumbi wokugcina omkhulu kule mikhumbi. Uma uthanda imikhumbi hhayi izindiza, bheka okunikezwayo ngoba ungahamba le ngxenye yomhlaba (kufaka phakathi ISouth Korea, iVietnam kanye neJapan), ezikebheni ezinhle kakhulu.
Ukufika eChina ngendiza
Kuyindlela esetshenziswa kakhulu kanti amasango okungena avamise ukuba seBeijing noma iHong Kong. Ngokusobala, neShanghai uma kukhulunywa ngokufika kusuka emazweni asentshonalanga.
Kusuka phakathi kwale «minyango»Mhlawumbe inketho engcono kakhulu yiHong Kong ngoba imvamisa ishibhile futhi ine-visa ende. Yini enye, itholakala kahle Ngokuphathelene nezindawo ezijwayelekile zokuhamba nobhaka, ngale kwalokho kukodwa kuyathakazelisa kakhulu futhi kunikeza uhlobo lokujwayela iChina ngokubanzi.
Fika eChina ngomhlaba
Uma usuvele uzungeza le ngxenye yomhlaba ungasondela ngomhlaba futhi wenze ukuwela komngcele kusuka ezindaweni eziningana ngoba iChina yizwe elikhulu kakhulu.
Ukusuka ePakistan ungawela emgwaqeni omkhulu I-Karakoram futhi ufike Kashgar, esifundazweni iXinjiang. Kungenzeka kungabi yindawo enhle kakhulu ukubheka isimo ePakistan nezinkinga zepolitiki iChina enazo lapha nabambalwa abangamaSulumane.
Ukusuka eLaos ungawela ngeBoten uye UMengla, esifundazweni saseYunnan. Kusuka eNepal kwe TibetNgokusobala, yize ekhumbula lonke udaba lwama-visa nezimvume ezikhethekile. Kusuka eVietnam kunezinketho ezintathu ezihlukile:
ngePassship Friend eya eNanjing
kusuka eLao Cai kuye eKumning
kusuka kuMong Cai kuya eDongxing
Ukuwela okushibhile kungokokuqala Ngoba ungathatha ibhasi lasebusuku eliya eDong Dang futhi usuke lapho ukhokhe isithuthuthu ukuhamba amakhilomitha ambalwa uye eBungani Pass, Youyi I-Guan ngesiShayina o awu ngi Quan ngesiVietnam.
Umngcele lapha uvulwa ngo-7 ekuseni, Kuze kube ngu-4pm. Uma usohlangothini lwamaShayina wehla ngomgwaqo uye emgwaqweni omkhulu bese ulinda ibhasi eliya ePinxiang, amakhilomitha ayi-10 ukusuka lapho ungathola khona amabhasi ajwayelekile aya eNanning. Futhi ukusuka lapho uGuilin uhamba ibhasi elilodwa ebusuku ...
Enye inketho ukuthatha isitimela samazwe aphesheya esivela eHanoi. Isuka kabili ngesonto, ngoLwesibili nangoLwesihlanu ngo-2 ntambama bese ifika eBeijing ngemuva kwezinsuku ezimbili ngo-5 ntambama. Ifinyelela ePianxing phakathi kwamabili, iNanning ngo-8: 40 ekuseni noGuilin ngo-7: 20 ntambama. Ikona elula kodwa ebiza kakhulu, Yebo kunjalo.
Ngokukhetha kwesibili, uhamba ngesitimela sasebusuku uye eLao Cai, uwele umngcele lapho uphinde uthathe isitimela noma ibhasi futhi ukusuka eKunming uye eHekou. Isitimela sasebusuku naso sihamba lapha kabili ngeviki, ngoLwesihlanu nangeSonto, sisuka eHanoi. Le sevisi isuka ngo-9: 30 ebusuku bese ifika eKunming North Station ngo-7: 25 ekuseni.
Ukukhuluma ngezitimela ezithandwayo nezinhle Isitimela saseTrans-Siberia noma iTrans-IsiMongolia kubuye kube inketho. Esimweni lapho ukhona en Kazakhstan ungawela usuka e-Almaty uye I-Urumqi o I-Yining, futhi uma usuvele ungaphakathi kwendawo yamaShayina, eHong Kong naseMacao, ngoba ukweqa umngcele kulula futhi kuseduze.
Njengoba uzobona kuzinketho Ukuwela kwemingcele yangaphambilini phakathi kweChina nomakhelwane bayo kwenziwa ngomgwaqo noma isitimela kanjalo kunamabhasi amaningi eza futhi zidlule nazo.
Ukusuka empumalanga ungafinyelela ezweni ngokusebenzisa ukuwela kwemingcele emibili neVietnam futhi futhi kusuka eMyanmar naseLaos. Kusuka ePakistan sesikushilo, ngeKarakoram Pass naseNepal nge-El Tibet.
Bese ukhumbula ukuthi akukho ukuwela kwemingcele phakathi kweChina neNdiya okuvulekile Yebo, ubudlelwane bezepolitiki abukho ezimeni ezinhle kakhulu njengamanje. Kuze kube manje sihlala sikhuluma ngamabhasi, imini nobusuku, kepha ... Ungakwazi ukushayela imoto?
Iqiniso ukuthi umbono ojwayelekile ugcizelela iqiniso lokuthi iyingozi futhi iyadukisa ngandlela thile ukuya eChina ngemoto uma ungowokufika futhi ungenawo umyalo obanzi wolimi. Cishe lapha abantu abakhulumi isiNgisi futhi ukwenza uzwisiswe kungaba isihogo.
Ngaphezu kwalokho, ukungena okuhle kakhulu ongakwenza ngemoto nge-El Tibet, indawo ebanda kakhulu cishe unyaka wonke. Ngabe usazizwa unje? Ngemuva kwalokho kufanele wazi ukuthi ukusuka eNepal ungawela ngemoto emngceleni ophakathi Kodari noZhang mu, ngokubekezela kunjalo, lokho kungamaphepha.
Ungangena futhi ngemoto kusuka eMyanmar. Konke lokhu kunama-visa ngokulandelana namaphepha emoto. I- imvume yezwe lakho yokushayela, imvume yesikhashana ekhishwe uhulumeni wase-China, nemvume yamazwe omhlaba, uma kwenzeka nje.
Kufanele ugcine engqondweni ukuthi Yize ukwazi ukushayela eChina, kufanele wenze uhambo lwakho lwaziwe ngaphambi kwesikhathi. E-China, abokufika bangashayela kuphela emizileni ethile ngakho-ke uma lokhu kungamasu akho, qiniseka ukuthi yonke imininingwane esehhovisi lenxusa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » China » Ungafika kanjani eChina? Izindiza, izitimela nezinye izindlela
ULuis rene kusho
mngani, ungaya eChina? Nginentshisekelo yokwazi amathiphu nezinto, ngifuna ukuya!
Phendula ku-luis rene
Iziphephelo ezihlanu zasehlobo ezivela eLondon
IGuatapé, idolobha elimibalabala kunawo wonke eLatin America